Makungwa mashanu makuru pasirese, iwe unoziva iwo zvaari? | Kufamba Nhau
Maria Jose Roldan | | Beaches, famba
Isu takagara tichiziva nyika yedu se "nyika yebhuruu" uye ikozvino huwandu hwemvura huripo paNyika yedu hahune chekuita nayo zvichienzaniswa nemamirioni emakore apfuura. Parizvino makungwa epasi redu anotora zvinopfuura 70% yepasi pedu uye pane huwandu hweshanu pakati padzo hwatinosimbisa hutatu hukuru, ndiko kuti, Atlantic, Indian nePacific. Nekudaro, nhasi ini ndoda kukuudza iwe zvishoma nezvazvo kuitira kuti pamusoro pekuziva ivo nerumwe ruzivo rwakazara, iwe unogona kuziva kuti yavo irondedzero ipi maererano nekuwedzera kwavo.
1 Pano pane gungwa rimwe chete
Pano pane gungwa rimwe chete
Kunyangwe muchinyorwa chino ini ndoda kukupa iwe yakajairika nhoroondo yemakungwa mashanu aripo papasi redu, chokwadi ndechekuti ese mashanu ari mugungwa rimwe chete, asi zvinoenderana nenzvimbo yavari, vanogamuchira rimwe zita kuti vakwanise kuvawana chaiko.
Kunyange paine gungwa rimwe chete repasi rose, iro mvura hombe inovhara zvikamu makumi manomwe kubva muzana zvepasi, asi yakaganhurwa munzvimbo dzakasiyana siyana. Iyo miganhu iri pakati penzvimbo idzi yakashanduka nekufamba kwenguva kwezvakasiyana nhoroondo, tsika, nzvimbo, uye zvikonzero zvesainzi.
Nhoroondo, kwaive nemakungwa mana: iyo Atlantic, Pacific, Indian, uye Arctic. Nekudaro, nyika zhinji - kusanganisira United States - izvozvi zvakare vanoziva iyo Southern Ocean (Antarctica) segungwa rechishanu. Asi Pacific, Atlantic, uye Indian Ocean vanozivikanwa semakungwa makuru matatu epasi nekuda kwekuwedzera kwavo kukuru.
Iyo Antarctic Ocean ndiyo nyanza nyowani, asi hadzisi nyika dzese dzinobvumirana pamiganhu yakafungidzirwa gungwa iri (rinotambanuka kubva kumahombekombe eAntarctica), asi parizvino igungwa rechishanu uye rinofanira kutarisirwa kuti rikwanise kudoma mazita ese. Tevere ini ndichataura newe mune mimwe mitsara yakajairika kuti iwe uzive zvishoma nezve imwe neimwe yemakungwa mashanu aripo mukati megungwa guru chete.
Kuwedzeredzwa: 166.240.992,00 mativi emakiromita.
Gungwa rakakura kwazvo papasi redu rinotora chetatu chepasi uye rinotambanuka kubva kuArctic kuchamhembe kuenda kuAntarctica kumaodzanyemba, ichitora zviwi zvinopfuura makumi maviri neshanu, izvo zvakaenzana kupfuura mamwe makungwa ese akasanganiswa. Iyo Pacific Ocean inogara makumi matatu muzana ePasi uye iri pakati peAmerica kusvika Kumabvazuva kwePacific Ocean basin nemakondinendi eAsia neAustralia kumadokero. Iyo equator inoipatsanura muNorth Pacific Ocean uye iyo South Pacific Ocean.
Zita rinobva pashoko rinoti "rugare", ndokuwana zita iri kubva kumuPutukezi muongorori Fernando Magellan muna 1521 akadana mvura idzi "Pacific Ocean" zvinoreva gungwa rine rugare. Makungwa ayo akarimwa nezvikepe zvakawanda munhoroondo yese.
Kuwedzeredzwa: 82.558.000,00 mativi emakiromita.
Yechipiri mukuwedzera inotambanuka kubva kuNorth Arctic Glacial Ocean kuenda kuSouth Antarctic Ocean, inogara makumi maviri muzana yepasi rese repasi. Pamusoro pezvo, inozivikanwawo segungwa diki pane ese, yakaumba makore mazana maviri emamiriyoni apfuura apo nyika huru yePangea yakakamukana.
Iyo equator inoparadzanisa Atlantic Ocean muNorth Atlantic Ocean uye South Atlantic Ocean. uye iri pakati peAmerica nemakondinendi eEurope neEast Africa. Iyo equator inoparadzanisa Atlantic Ocean muNorth Atlantic Ocean uye South Atlantic Ocean.
Kune zvitsuwa zvakawanda muAtlantic Ocean, pakati pezvinonyanya kuzivikanwa ndeizvi: The Bahamas, Canary Islands (Spain), Azores (Portugal), Cape Verde Islands, Greenland, isiri iyo chete hombe yezvitsuwa zviri muAtlantic Ocean, asi zvakare panyika.
Izwi rinobva ku'Atlantic 'rinobva mungano yechiGiriki zvinoreva kuti' Gungwa reAtlas '. Atlas ndiyo yaive titan yaifanirwa kunge iri pamucheto wepasi uye kutakura matenga (nzvimbo dzekudenga) pamafudzi ake sechirango chakatemwa naZeus kubvira Atlas payakarwa nevamwari veOlympian kuti vatonge matenga.
Kuwedzeredzwa: 75.427.000,00 mativi emakiromita.
Kufukidza zvishoma zvishoma pasi pe20% yepasi, iyo Indian Ocean inoona nezvekugezesa miganhu yeMiddle East, South Asia, Australia, East Africa uye Southeast Asia.
Kune zviwi zvakawanda muIndian Ocean, pakati pezvinonyanya kuzivikanwa ndeizvi: Mauritius, Reunion, Seychelles, Madagascar, The Comoros (Spain), Maldives (Portugal), Sri Lanka, yaimbozivikanwa seCeylon. Iri zita rinobva kunzvimbo yakatenderedza peninsula yeIndia.
Kuwedzeredzwa: 20.327.000,00 mativi emakiromita.
Gungwa rekupedzisira mukuwedzera iAntarctic Ocean, iyo inokomberedza Antarctica, ichitenderedza nyika zvizere, sezvinoita Arctic Ocean. Iyi gungwa inozivikanwawo seSouth Ocean.
Maumbirwo egungwa anosanganisira pasherefu pasherefu makiromita mazana maviri nemakumi matanhatu paupamhi ayo anosvika pakukwirira kwaro kwemakiromita mazana maviri nemazana matanhatu munharaunda yeWeddell neRoss Seas.
Kuwedzeredzwa: 13.986.000,00 mativi emakiromita.
Chekupedzisira asi chisiri chidiki, isu tine Arctic Ocean, inova nebasa rekukomberedza North Pole, inochengetera hombe dzechando gore rese. Izvi zviri kuchamhembe kwekondinendi yedu, Asia neAmerica. Arctic Ocean ndiyo diki pane ese makungwa asi ine makungwa asingazivikanwe zvakanyanya nekuda kwemamiriro ekunze ane hasha uye nechando chegore rinovhara makungwa.
Inenge yakavharirwa, Arctic Ocean yakaganhurwa neGreenland, Canada, Alaska, Russia, neNorway. Iyo Bering Strait inosangana nePacific Ocean uye Gungwa reGreenland ndiyo inonyanya kubatana kuAtlantic Ocean.
Iyo Arctic Ocean chando nzvimbo iri kudzikira ne8% makore gumi ese. Isu tese tinofanirwa kuziva zviri kuitika nekuchinja kwemamiriro ekunze uye kuchengetedza nyika yedu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kufamba Nhau » famba » Beaches » Makungwa mashanu makuru munyika